Blogathon- नेपालका समस्याहरूमा छलफल (सन्दर्भ- गोविन्द केसीको आन्दोलन) – tistung deurali
Posted on March 28, 2015 September 7, 2015 by tistung
ट्वीटरमा बहसको परिधि अलि सानो र अप्ठेरो लाग्छ । पत्रिकाहरूका आफ्नै सिमीतता र वाध्यता छन् । हामीहरू बोल्ने सजिलो ठाउँ सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट नै हो । तर यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ?
अहिले डा गोविन्द केसीको अनसनले नेपाली समाज र राजनीतिका अनेक समस्याहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । धेरै वर्षदेखि यस किसिमका बेथितिमा हामी चुप लागेर केही हस्तक्षेप नगरेकाले यो स्थिति निर्माण भएको हो । अहिले पनि स्थिति निराशाजनक छ, तर सबै बितिसकेको छैन । आखिर हामी बस्ने, हाम्रा सन्तति हुर्काउने र हामीले भविष्य बनाउने समाज र ठाउँ यही हो । हाम्रो हस्तक्षेप आवश्यक छ । अहिलेको नेपालको बेथिति २०५५-२०५७ तिर कै जस्तो लाग्दैछ । फरक यत्ति हो, त्यति बेला हाम्रो ध्यान र उर्जा मोड्ने एउटा हिंस्रक युद्ध पनि सँगै थियो । बोल्न डराउनुपर्ने समय थियो । कि चुपचाप सह, कि अर्कै बाटो लाग भन्ने स्थिति थियो । कसरी यस किसिमका समस्या समाधान गर्ने भन्ने चिन्तन भन्दा पनि मान्छेहरू मर्ने क्रम कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने छलफलले प्राथमिकता पायो । हामीले कहिल्यै राम्ररी यस्ता समस्या समाधानमा ध्यान दिने मौका नै पाएनौँ । अहिले सोच्नुस् त, आजको दिनमा नेपाली राज्य बेकारको भयो भनेर कसैले युद्ध सुरु गरेर नेपाली समाजलाई अस्तव्यस्त बनायो भने के हुन्छ ? के त्यसले समाधान दिन्छ ? कि हाम्रो समय बर्बाद गर्छ र समाधान झन् पर धकेल्छ ?
धादिङ्मा राजेन्द्र पाण्डेजस्ता नेताको पकड बलियो बनाउन युद्धले स्थापित गरेको हिंसा धेरै जिम्मेवार छ । त्यस्तो हिंसाले चरी प्रवृत्ति जस्ता प्रतिद्वन्द्वी जन्मायो । धादिङ्मा माओवादी र उसको नेता सालिकराम जमरकट्टेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै इमानको राजनीति गर्ने र बौद्धिक किसिमको नेतालाई सम्भव हुन्थ्यो होला त ? वा गुण्डागर्दी गर्ने र खराब राजनीति गर्ने मान्छे नै त्यस किसिमको वातावरणमा टिक्न सक्थ्यो ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, समाजका समस्याहरूमा विविध पक्ष मध्ये एउटा निकै महत्वपूर्ण पक्ष छलफल गर्न खोजेको हुँ ।
मेरो उद्देश्य चाहिँ यस किसिमका छलफलहरू अरू अर्थपूर्ण होऊन् भन्ने हो ।
Posted in nepalTagged #IamwithDrKc #IamWithGkc blogathon discussion dr govinda kc govinda kc Nepal
← विरोध गर्ने वैकल्पिक तरिकाहरू
#IamwithDrKc केही समस्याका तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानहरू →